“Waxaan eeganayaa oon isku dayayaa inaan gaaro heerkiisa oo kale.”. – Gool FM
“Waxaan eeganayaa oon isku dayayaa inaan gaaro heerkiisa oo kale.”.
Byare March 21, 2019
(England) 21 Maarso 2019. Xiddiga ugu shidan naadiga Chelsea iyo xulka Belgium Eden Hazard ayaa qiray inuusan gaarsiisaneyn heerka uu joogo Maxamed Saalax isla markaana uu isku dayayo sidii uu ku gaari lahaa.
Labada laacib oo uu ka dhaxeeyo xiriir saaxiibtimo oo aad u heer sare ah ayaa waqti gaaban wada joogay Chelsea inkastuu Saalax ku dhibtooday inuu boos ka helo Blues.
Yeelkeede, Laacibka reer Masar ayaa waji kale kula soo laabtay Premier League kaddib markii uu ku soo biiray Liverpool oo wuxuu ku guuleystay laacibka sanadka isagoona sidoo kale rikoodh ku qaaday gool dhalinta Premier League ee kal ciyaareedkii tagay isagoona iminka hogaanka u haya.
Hazard oo ay u badan tahay inuu ka tagi doono Chelsea ayaa qiray in Saalax uu ku jiro waqti aan innaba caadi ahayn sidaa darteed uu doonayo inuu gaaro heerkaas.
Mar uu u waramayay NBC Sports ayuu yiri:
“Waan ka helaa Luka Modric.
“Wuu iiga qoto dheer yahay qadka dhexe laakiin dabcan waan ka helaa Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo.
“Maxamed Saalax waa mid ka mid ah saxiibadeyda wanaagsan wuxuuna sameynayaa wax aan innaba caadi ahayn.
“Waxaan isku dayaa inaan eegto laacibkan, waxaana isku dayaa inaan gaaro heerkaas.”.
HORDHACA: Kulanka dhex mari doono kooxaha Horseed Vs Heegan